Weedhihii Laga Yidhi, Shaqsiyadii Turjubaan Qoraa, Suxufi Iyo Siyaasi Xaamud Jaamac Iyo Sida Loo Sifeeyey Tariikhdiisa Cadan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Weedhihii Laga Yidhi, Shaqsiyadii Turjubaan Qoraa, Suxufi Iyo Siyaasi Xaamud Jaamac Iyo Sida Loo Sifeeyey Tariikhdiisa Cadan
, “wuxuu u tabarucay noloshiisa hal-abuurka qiimaha badnaa ee qoraalkiisa iyo tarjumaadda suugaanta dhaxalka uu ka tegey.” Madaxweynaha Yemen Abdurabbuh Hadi
“Waxa Baxay Midabkii Caqliga Badnaa” Wuxuu tusaale u ahaa caalimka cilmiga, diinta iyo caqiidada, Cali Naasir Madaxweynihii hore ee Koonfurta Yemen Cadan
Cadan(ANN)-Magaalada Cadan, gaar ahaan gobolka Kreiter, ayaa sagootiyay Marxuum Xaamud Jaamac Xusueen oo ku suntanaa suugaanta, isla markaana hormood u ahaa dhaqankeeda, siyaasadeeda, saxaafadeeda iyo shaqsiyaadkeeda warbaahinta iyo haldoorka, waxaana loogu yeedhay inuu ahaa Marxuum Xaamud Jaamac meeshii ugu dambeysay ee halganka iyo inay Cadani weyday wiilkeedii.
Sidaa waxa yidhi, Wargeyska Al Ayyam oo ka mid ah kuwa ugu da’ada weyn xilligan Magaalada Cadan uguna Af-dheer oo wax ka qoray Geerida Allah ha u naxariistee Xaamud Jaamac Xuseen oo caan ku ahaa (Hamed Jama/ حامد جامع ), wuxuuna Wargeysku isagoo kasii hadlaya murugada Geerida sheegay in Cadan ay weyday, caaqil, turjubaan, qoraa, suxufi iyo siyaasi caan ahaa Xaamud Jaamac oo Arbacadii 30 July aas qaran loogu sameeyay Cadan.
,Marxuum Xaamud Jaamac oo noloshiisa mashquulka badan ka dib u adeegay magaaladiisa Cadan iyo dadkiisaba xilalkii uu ka qabtayna ay ka mid ahaayeen Wasaaradaha Dhaqanka iyo Warfaafinta. , Sidoo kale howlihiisii iyo qoraalladii iyo tarjumadihii lagu daabacay joornaalka ‘xikmadda’ ee midowga qoraayaasha Yemen iyo markii dambe wargeyskii “Altagamu Alwahdal Yemen» oo ku hadlayay afkii Xisbiga (Altagamu Yemen Unionist Rally Party), kaas oo ka mid ahaa tiirarkii daabacaaddii ugu horreysay sagaashameeyadii, kasoo bixi jiray Magaalada Cadan.
Xaamud Jaamac, ma ahayn oo keliya Siyaasi, suxufi iyo qoraa ee wuxuu ahaa shaqsi ku xeel-dheer Luqadaha , waxaana si gaar ah loogu ixtiraami jiray Luqadaha Carabiga iyo Ingiriisida, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qofkii ugu wanaagsanaa Cadan marka ay noqoto Turjumaada, wuxuuna Turjumi jiray Luqado kale.
Wuxuu Turjumay Bugaag baddan iyo Qoraalo oo noqday tarjubaanada ugu wanaagsan Cadan.Wuxuu hayay tarjumaado badan oo qaarkood la daabacay, qaarna waa la filayay . Sanadkii 1988, waxaa lagu daabacay joornaalka Xisbiga hantiwadaagga, joornaalka caqliga ee Xisbiga hantiwadaagga. Qaybta labaad ee buugga David Smiley ee “Howlgalka Jasiiradda Carbeed” ( «مهمّة في الجزيرة العربية» )ee ku saabsan xaaladda Yemen sannadihii 1980-naadkii.waxa kale oo uu tarjumay buugga saddexaad oo cinwaankiisu yahay “The Last Site“, oo ah tarjumaadda qoraalada sarkaal iyo siyaasi Ingiriis ah oo ku saabsan sannadihii u dambeeyay ee Cadan.
Madaxweyne Abdurabbuh Hadi, ayaa ku ammaanay marxuumkaa inuu u tabarucay noloshiisa hal-abuurka qiimaha badnaa ee qoraalkiisa iyo tarjumaadda suugaanta Ingiriisiga iyo hoggaamintii isaga iyo saaxiibkii dhintay ee dagaalyahankii Cumar al-Jawi ee wargeyska Al-Tagammu oo Xaamud Jaamac ka ahaa soo saare, wuxuuna Mr. Hadi u rajeeyay Marxuumka in Ilaahay u naxariisto oo jannooyinkiisa ugu deeqo, isagoo tacsi tiiraanyole u diray qoyskii, ehelkii, qaraabadii iyo asxaabtii marxuumka. sida lagu daabacay barta internetka ee golaha Yemen.
Wuxuu tusaale u ahaa caalamka cilmiga bulshada, cilmiga diinta iyo caqiidada, wuxuu jeclaa Bulshada Cadan, wuxuu nebcaa munaafaqnimada iyo munaafiqiinta . Wuxuu ahaa sida reer Cadan, Ka soo qaad buuralayda midabkooda madowga iyo adkaanta Ka qaadashada awoodda badda iyo qoto dheerida fikirka iyo taariikhda, kalsoonida iyo dhiiranaanta, wuuxuna ahaa tusaale laga soo qaaday dadka ku nool Cadan iyo ilbaxnimo iyo jacaylka nolosha, sidaa awgeed wuxuu noqday ruuxa qaatay halyeynimada iyo dhaqanka iyo quruxda Cadan, wuxuuna ahaa halyeeyada u adkaystay rabshadaha.
Tani waa sida uu Alkseer ugu noolaa noloshiisa iyo xaqiiqada ah in falsafadiisa iyo riyadiisa iyo xiidhashada cirka ayna suurtagal ahayn inay ku dhacaan markii dad badani ku dhacday oo ka baxeen mudaakaraadkoodii,(riyooyinkoodii) maxaa yeelay waxay ku qanceen, oo aan u hanweynayn jago ama shaqo, sida kuwa kale oo badan.
Hamigiisa iyo riyooyinkiisu waxay ahaayeen sidii ay dadku ku gaadhilahaayeen nolol xor ah oo sharaf leh. Waxayna ka buuxsantay rajo, adkeysi adag iyo inuu diiday in laga adkaado iyo guuldaradii ugu adkeydse ayaa noqotay geerida.
Wuxuu qoray, Xaamud Jaamac oo tarjumay oo aan akhristay marar badan, waxyaabaha uu daabacay qaar ka mid ah wixii uu turjumay.waxuu aad ugu fiicnaa Ingiriisiga, oo uu ku tarjumay tarjumaadda Carabiga oo uu tarjumay, maktabadda Cadan, wuxuu ku kobciyay buugaag qiimo leh oo tixraac u noqday aqoonyahannada iyo jiilalka danbe ee Carabta iyo dunida kale.
Isagu ma uu aqoon jidkii jagooyinka xilalka, sababtoo ah caqliga dhabta ahi wuxuu ka weyn yahay jago kasta, Weligii ma arkin kalsooni darrada ka jirta albaabada xukuumadda maxaa yeelay xafiisyadu guud ahaan waa isku buuqsan yihiin taliyaha iyo caqliga, marka laga reebo xaalado naadir ah .. Wuxuu isu arkay inuu ku dhowyahay caqliga dhabta ah iyo dadka fud-fud maxaa yeelay wuxuu iska leeyahay.
Cali Naasir Maxamed Madaxweynihii hore ee Yemen Cadan
Sidoo kale, Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Yemen, Lieutenant-General Ali Mohsen Saleh, ayaa ka hadlay geerida qoraa, turjubaan, siyaasi Xaamud Jaamac, wuxuuna bogaadiyay guulaha uu ku dhintay iyo doorka qaran iyo doorka hal abuurka leh ee uu ka qaatay tarjumaada iyo kobcinta hanaanka siyaasada ee Yemen gaar ahaan Cadan, isaga oo ka qayb qaatay aasaaska xisbiyada isbahaysiga midnimada dalka, kobcinta Siyaasada, Aqoonta saxaafada iyo Suugaanta.
Warbaahinta Carabta, sida Telefishanada, Idaacadaha, Joornaalada iyo kuwa Elektarooniga, iyo Bogaga Social Media, ayaa todobaadkan ka sheekaynayay Taariikhda Marxuum Xaamud Jaamac, waxaana qaarkood ku muujiyeen Sugaanyahanada Carbeed Gabayo baroordiiqada ah oo ka tiriyeen.
Marxuum Xaamud jaamac walaalihii maaha Siciid Jaamac iyo Saalax Jaamac oo keliya ee saddexdooda ayaa noqday shamacyo ifaya oo la falgalay Caalamka aqoonta iyo falsafada, waxaana ka tacsiyaynayaa geeridaa dhamaantood .Marxuumkana waxaan Allah uga baryaynaa inuu Jannafardawsa ku casuumo dhammaanteena samir iyo Iimaan saadiqa inaga siiyo.